Mayelana NATHI | I-Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd.
I-Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd. eyaziwa nangokuthi i-YUANKY yaqalwa ngo-1989 I-YUANKY inabasebenzi abangaphezu kuka-1000, ehlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-65000. Sinezintambo zokukhiqiza zesimanje nemishini yokulawula ephezulu nabaphathi besayensi, onjiniyela abangochwepheshe, ochwepheshe abaphezulu abaqeqeshiwe kanye nabasebenzi abanamakhono. I-YUANKY ihlanganisa i-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa, kanye nensizakalo ukwakha isixazululo esiphelele se-elekthronikhi nesikagesi.
I-YUANKY iqinisekiswe yi-ISO9001: 2008 ne-ISO14000 TUV Management Management System. Sinikeza zonke izinhlobo zezitifiketi zokuhlola, ezifana nesitifiketi soMkhiqizo, umbiko wokuhlolwa kwemboni, umbiko wokuhlolwa kwamandla wevolthi ephezulu, umbiko wokuhlolwa komuntu wesithathu, iziqu zokubhida njll.
I-YUANKY ikhiqiza ikakhulukazi i-breaker breaker, i-fuse, i-contactor ne-relay, isokhethi nokushintsha, ibhokisi lokusabalalisa, ama-arrest arresters njll. Imikhiqizo yethu ihlangabezana namazinga kazwelonke namazinga embonini. Sinezitifiketi zemikhiqizo yethu yokuthengisa eshisayo, njenge-CB, SAA, CE, SEMKO, izitifiketi ze-UL njll. Sineqoqo labahloli futhi yonke imikhiqizo yethu izohlolwa ngaphambi kokushiya imboni yethu. I-YUANKY ithengise imikhiqizo emazweni angaphezu kwe-100 emhlabeni jikelele futhi kancane kancane ithola idumela kuzo zombili ikhwalithi nokwethembeka.
Ikhulu lama-21 leminyaka yisikhathi esigcwele izinselelo namathuba, thina bantu baseYUANKY sizoqhubeka nokuzithuthukisa futhi sizedlulele ngokwethu ukubhekana nomncintiswano onamandla ngakho konke ukuzethemba nokusebenza kanzima kwethu. Abantu base-YUANKY bagcina ifilosofi "yokwethembeka njengenhlokodolobha, ikhwalithi yokusinda, izindlela ezintsha zentuthuko". Siphikelela kwikhwalithi yomkhiqizo osezingeni lokuqala kanye nensizakalo esezingeni lokuqala ngemuva kokuthengisa ukuthuthukisa kanye nomkhakha kazwelonke. Umnotho wezimakethe ukusinda kwezinamandla kakhulu, kufana nokugwedla isikebhe ngomfula, hhayi ukuqhubekela phambili ukubuyela emuva. Abantu base-YUANKY banethemba eliqotho lokusebenzisana namakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngekhwalithi enokwethenjelwa, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo ephezulu
Ake sibheke phambili esikhathini esizayo! Masisebenzisane futhi sakhe ubuhlobo bebhizinisi lokuwina! Sifisa kakhulu ukudala ikusasa eliqhakazile nawe!